च्यानल इस्तानबुलको लागि विपत्ती चेतावनी! अपेक्षित भूकम्प 9-10 गंभीरता बाट प्रभावित हुन सक्छ RayHaber
घरटर्कीMarmara क्षेत्र34 इस्तांबुलच्यानल इस्तानबुलको लागि विपत्ती चेतावनी! अपेक्षित भूकम्प 9-10 गंभीरता बाट प्रभावित हुन सक्छ
च्यानल इस्तानबुलको लागि विपत्ती चेतावनी! अपेक्षित भूकम्प 9-10 गंभीरता बाट प्रभावित हुन सक्छ; विज्ञान एकेडेमीका सदस्य डा नासी गरारले कनाल इस्तानबुल परियोजनाको बारेमा उल्लेखनीय बयान दिए। परियोजनाले इस्तानबुलमा सिर्जना हुने जोखिमलाई जोड दिदै गौरवले भने, फजल नहर उत्खननको क्रममा अत्यधिक चिप्लोपन, पहिरो र भूक्षेत्र विशेषताहरुका कारण ढल्नेछ। यदि अपेक्षित भूकम्प आयो भने, च्यानलको मारमार मुख 9-10 को गम्भीरताबाट प्रभावित हुनेछ र यो सम्भव छ कि यसले गम्भीर क्षति भोग्नुपर्नेछ। कुल
लगभग 1-1,5 अरब m3 सामग्री उत्खनन हुनेछ र यस क्षेत्रको इकोसिस्टम, जीव र वनस्पति ठूलो हदसम्म नष्ट हुनेछ भनेर, गररले भने, "सम्भवतः टापुहरू मर्मारामा गठन हुनेछन्। मारमारामा सक्रिय गल्ती प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै, यो काम अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुनेछ। यस च्यानलको उत्खननको क्रममा अत्यधिक चप्पल, पहिरो र भूभागका विशेषताहरूको कारण ढल्नेछ। ”
"9-10 हिंसा मा प्रभावित हुन सक्छ"
इस्तानबुलमा भएको सम्भावित भूकम्पलाई ध्यान दिदै, गरारले भने, "यदि अनुमानित भूकम्प आयो भने, मार्नेलको मुखल एक्सएनयूएमएक्स-एक्सएनयूएमएक्सको तीव्रताबाट प्रभावित हुनेछ। यो सम्भव छ कि शून्य सहिष्णुतासहितको क्षैतिज र ठाडो आन्दोलन, जस्तै नहर, यस भूकम्पबाट गम्भीर क्षति भोग्न सक्दछ (वा त्यस पछि)। कुल
गररले भू-विज्ञान र भूकम्पको सन्दर्भमा केही नक्शा साझेदारी गरेर परियोजनाको मूल्या and्कन गरे र निम्न सूचीबद्ध गरे:
1- परियोजना को उद्देश्य: इस्तानबुल बासफोरस जहाजहरु को लागी सहजता प्रदान गर्न, दुर्घटनाहरु रोक्न र आय प्रदान गर्न।
2- मार्ग: यो Küçükçekmece-Terkos ताल बीचको उपत्यकामा उत्खनन गरिनेछ। यो एकल जहाज पार गर्न सक्ने चौडाई र गहराई हुनेछ।
3 SOIL (भूविज्ञान): यो च्यानलले Miocene र कान्छी, अधिक समस्याग्रस्त माटो (तलछट) काक Çेकमेस क्षेत्रमा कटौती गर्दछ र Eocene-Oligocene इकाईहरूमा प्रवेश गर्नेछ जब यो उत्तरमा जान्छ। यस फ्लोरमा धेरै कडा चुनाको पत्थर र अपेक्षाकृत नरम क्लेस्टस्टोन, सिलस्टोन, बलुवाको ढु and्गा र मार्सहरू छन्। कालो सागरमा च्यानलको प्रवेशद्वार मैदानमा पातलो जमिन समावेश गर्दछ। यदि यो च्यानल उत्खनन गरिएको छ भने, यो अपरिहार्य छ:
a) लगभग 1-1,5 अरब m3 सामग्री खुदाई हुनेछ। यस सामग्रीको उत्खननले वर्षौं लिन सक्दछ, उत्खनन मेसिनरी र विष्फोटक पदार्थ प्रयोग हुनेछ, त्यसैले उपत्यका र यसका वरपरका इकोसिस्टम, जीव-जन्तु र वनस्पति ठूलो हदसम्म नष्ट हुनेछन्।
b) यो साइजको सामग्री कहिँ पनि राख्नु सम्भव छैन। हुनसक्छ, मारलेटमा टापुहरू गठन हुनेछन्। मारमारामा सक्रिय गल्ती प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै, यो काम अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुनेछ।
c) च्यानलको उत्खननको क्रममा, त्यहाँ अत्यधिक स्लिपेज, भूस्खलन र माटोको सम्पत्तीमा निर्भर हुने ढल्नेछ।
d) जब समुद्रको सतहमा उत्खनन हुन्छ, यस च्यानलले पानी निकास प्रणालीको रूपमा काम गर्दछ, यस खोलाको वरिपरि भूमिगत पानी भण्डारहरू नष्ट गर्दछ र यस क्षेत्रमा नुनिलोपनको कारण दिन्छ।
e) च्यानल र बसफोरस बीचको क्षेत्र टापु हुनेछ, त्यसैले सबै यातायात प्रणालीहरू परिवर्तन र गाह्रो हुनेछ। विशेष गरी नहरमा पर्ने संरचनाहरू उचाई र जग्गा अवस्थाका कारण अधिक जोखिमपूर्ण र महँगो हुनेछन्। यस टापुको थ्रेसबाट पृथक गर्नु सैन्य जोखिम पनि हुन सक्छ।
f) इस्तानबुल भूकम्पको पर्खाइमा छ। यदि अपेक्षित भूकम्प आयो भने, च्यानलको मारमार मुख 9-10 को तीव्रताबाट प्रभावित हुनेछ। तेर्सो र ठाडो आन्दोलनमा शून्य सहिष्णुतासहितको संरचना जस्तै नहरलाई यस भूकम्पले गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ (वा त्यस पछि)।
g) अधिकारीहरूका अनुसार, त्यहाँ कम्तिमा यस च्यानलको वरिपरि3मिलियन शहर हुनेछ। यसले भूकम्पको जोखिम बढाउनेछ। अधिक जनसंख्या भनेको जीवन र सम्पत्ति गुमाउनु हो।
h) यस च्यानलले कालो सागरलाई विलय गर्नेछ, संसारको सबैभन्दा प्रदूषित समुद्र मध्ये एक, र अहिले मर्दै गरेको मर्मारालाई। मध्य युरोपको सबै औद्योगिक प्रदूषण मार्मरमा भरिन्छ।
I) मारामाराको ओशोनोग्राफिक प्रणाली विघटन हुनेछ र यस समुद्रमा अक्सिजन खपतलाई तीव्रता दिइनेछ। यसले जीवनको अवस्थालाई अझ कठिन बनाउँछ। देख्न सकिन्छ, यस्तो परियोजना को फिर्ताको भन्दा एकमुष्ठ रकम हुन्छ। यसबाहेक, अरबौं डलर खर्च हुने यस परियोजनाको सट्टामा देशका थप आवश्यक कामहरू गर्न सकिन्छ। आजको टेक्नोलोजीको साथ, बोस्फोरसमा यातायात निगरानी गर्न सकिन्छ र अधिक सुरक्षित रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यो दुबै सस्तो र देशको फाइदाको लागि छ।
कानल इस्तानबुल मार्ग नक्शा
भूकम्प कार्यशालामा बोल्दै, İmamoğlu, च्यानल इस्तानबुल…
च्यानल इस्तानबुल परियोजना अपेक्षित भूकम्प ट्रिगर?
IMO Bursa शहरी परिवर्तन, ढुवानी र भूकम्प चेतावनी
जर्मनीमा रेल स्टेसनमा फेसिया
Facia यस समय रोकथाम! डेनिज़्ली - इज़्मिर ट्रेन तालिका ...
TMMOB बाट चेतावनी: च्यानल इस्तांबुल पागलपन रोक्नुहोस्
मन्त्रालयबाट, च्यानल इस्तानबुल चेतावनी
अपेक्षित इस्तांबुल भूकम्पको लागि मेट्रो इस्तानबुल प्रकोप ...
इस्तानबुल भूकम्प प्लेटफार्म
CHP इस्तानबुल काउ उप सहायक: "या च्यानल या या
कानल इस्तांबुल, पश्चिम इस्तांबुल आइल्याण्ड र भौगोलिक जोखिमहरू
3 भण्डारित भव्य इस्तानबुल सुरुnel र नहर इस्तानबुलका लागि ...
च्यानल इस्तानबुल ईआईए रिपोर्ट